प्रभावकारिता « Image Khabar
दैनिकी नै जोडिएको टीकापुरसँग छुट्यो बनगाउँको सम्बन्ध, औषधि किन्नसमेत समस्या
बाढीले सबैभन्दा बढी कैलालीको दक्षिणी क्षेत्रमा क्षति गरेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । टीकापुर नगरपालिका–८ बनगाँउमा सडक बगाएको छ भने अन्य ठाउँमा क्षतविक्षत छ ।
नयाँ–नयाँ भेरियन्ट देखिँदा खोप कति प्रभावकारी ?
नेपालमा हालसम्म डेल्टा, अल्फा, गामा र कप्पा गरी चार वटा भेरियन्टको संक्रमण देखिएको छ । यी मध्ये डेल्टा भेरियन्ट सबैभन्दा बढी संक्रामक रूपमा फैलिएको छ ।
एकै व्यक्तिलाई पाँच मन्त्रालय जिम्मा, सहज होला मन्त्रालयका काम ?
ओलीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनेर एकै मन्त्रीलाई पाँच वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको भार थमाउनु भएको छ । भलै अहिले गरिएको व्यवस्था अस्थायी हुने देखिन्छ ।
विश्वभर खोपको प्रभावकारिता घटीबढी हुनु स्वभाविक भएको भन्दै फूले भिन्न प्रविधिका खोप लगाउने र दुई मात्राबीचको समय बढाउँदा यसको प्रभावकारिता बढाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो । चीनमा चार वटा कम्पनीले कोरोनाको
चिनियाँ विज्ञ भन्छन्, ‘चीनले बनाएको काेराेना खोपको प्रभावकारिता न्यून छ’
एजेन्सी । चीनका स्वास्थ्य अधिकारीले चीनले बनाएको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप कम प्रभावकारिताको भएको खुलाशा गरेका छन् । चाइना सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनका निर्देशक गाओ फूलेले छेन्दुमा आयोजित एक
भरतपुर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएपछि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द
चितवन । कोभिडको जोखिम र संक्रमण बढ्दै गएपछि भरतपुर अस्पतालमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको छ । भरतपुर अस्पताल प्रशासनले एक सूचना जारी गर्दै
राप्रपाको बैठक बस्दै,पार्टी विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था हटाउन निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनका विषयमा छलफल हुने
काठमाण्डौं । निर्वाचन आयोगले विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउन निर्देशन दिएको विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । राप्रपाका उपाध्यक्ष
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कोरोनाको लक्षण देखिएपछि शनिबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उहाँमा संक्रमण पुष्टि भएको